“Waxaa jira bar-tilmaameedyo waaweyn aan isku dayayo in aan gaaro” _ Firmino – Gool FM
“Waxaa jira bar-tilmaameedyo waaweyn aan isku dayayo in aan gaaro” _ Firmino
(Liverpoo) 21 Jan 2019. Weeraryahanka reer Brazil iyo kooxda Liverpool Roberto Firmino ayaa shegay inaysan ku noqonin layaab go’aankii uu saxiibkiis Mohamed Salah ugu ogolaaday tuurista rigoorada kulankii ay 5-1 ay kaga badiyeen kooxda Arsenal.
Roberto Firmino ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyksa “Liverpool Echo” wuxuu kaga hadlay arintaan wuxuuna yiri:
“Iguma noqonin layaab go’aanka Mohamed Salah, waan ku faraxsanahay inuusan ahayn qof xaasid ah, isla mrkaana uu ii dhiibay kubada, waxaan doonayaa in markale aan u mahadnaqo”.
Inaas kadib Roberto Firmino ayaa wuxuu ka hadlay saaxiibkiis kooxda Liverpool ee Alisson Becker wuxuuna yiri:
“Way adag tahay in gool looga dhaliyo Alisson Becker tababarka kooxda, sidoo kale kulamada, waa goolhaaye aad u fiican, wuxuuna u qalmaa guul kasta uu gaaray”.
Intaas kadib Roberto Firmino ayaa wax laga weydiiyay rikoorada uu ka sameenayo horyaalka Premier League ee dalka England.
“Waan ku faraxsanahay taas, laakiin ma faraxsani, waxaan mar walba isku dayaa in aan sameeyo waxyaabo badan, isla markaana aan maalin kasta horumar sameeyo, iyadoo ay jiraan bar-tilmaameedyo waaweyn aan isku dayayo in aan gaaro”.
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Juventus vs Chievo
RASMI: Kevin-Prince Boateng oo TAARIIKH dhigay Kaddib markii uu ku biiray Barcelona iyo Laacibka oo Durba weeraray Real Madrid...(Muxuu yiri?)